भरतपुर १९मा पुनः मतदानको आदेश
काठमाडौं,(नेस) । सर्बोच्च अदालतले भरतपुर १९को मतदान पुनः गर्न आइतबार आदेश दिएको छ । सर्बोच्चबाट अधिवक्ता विकास भट्टराईले जानकारी दिएअनुसार सर्बोच्चले भर्खरै सो आदेश दिएको हो । लामो समयदेखि भरतपुर
७१ वर्ष पुगेका पूर्व राजाको चाहना— देश जोगियोस्
काठमाडौं,(नेस)पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो ७१औं जन्मोत्सवका अवसरमा शुक्रबार एक वक्तव्य जारी गर्दै देश जोगियोस् भन्ने आफ्नो चाहना भएको बताउनुभएको छ । उहाँले शुक्रबार जारी गर्नु भएको वक्तव्यमा भनिएको छ—देश
भरतपुर महानगरको निर्वाचनः सर्बोच्च अदालतले आज के भन्ला ?
काठमाडौं,(नेस) । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा हिजो आइतबार दायर गरिएको रिटका बारेमा आज न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको एकल
भरतपुरको १९ वडामा पुनः निर्वाचन हुने
काठमाडौं,(नेस) । निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाको विवादमा आएको मतगणना प्रक्रिया रोकेर वडा नं १९को मतदान पुनः गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको शनिबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको जनाइएको छ
स्थानीय तह निर्वाचन फेरि सर्‍यो, असार १४ मा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ, १७ जेठ । दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन असार १४ गते बुधबार हुने भएको छ । यसअघि सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन असार ९ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
होटल र्‍याडिसनका प्रमुखको निधन
काठमाडौं,(नेस) होटल र्‍याडिसनका प्रमुख तथा प्रबन्ध निर्देशक बिके श्रेष्ठको मंगलबार बिहान भैंसेपाटीस्थित उहाँको निवासमा ६४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । पारिवारिक स्रोतका अनुसार उहाँ केही समयदेखि क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो
आयोगले तीन दिनमा कुरा फे¥यो , जेठ १५ मा बजेट ल्याउन नपाइने
काठमाडौं,(नेस) । निर्वाचन आयोगले तीन दिनमा नै कुरा फेरेर जेठ १५ गते बजेट ल्याउन नपाइने जनाएको छ । जेठ १५मा बजेट ल्याए निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने उसको तर्क रहेको छ
व्यवस्थापकीय हिसाबले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सर्दैन– प्रमुख आयुक्त डा यादव
काठमाडौँ, ९ वैशाख । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेकाले वैशाख ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापकीय हिसाबले कुनै पनि हालतमा नसर्ने बताउनुभएको छ
सङ्खुवासभा, ८ वैशाख । बरुण नदीमा आएको बाढी पहिराका कारण अरुण नदी थुनिएको छ । बाढी पहिराको कारण भोटखोला गाउँपालिकाको स्याक्सिला गोलामा अरुण नदी थुनिएको हो । बिहीबार साँझदेखि नदी
भरत केसी उडिसा (भारत), ८ वैशाख । मित्रराष्ट्र भारतको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज आफ्नो भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कनुहुने भएको छ । भारतीय समकक्षी राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको
राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध अझै मजबुत बन्ने
भरत केसी० काठमाडौँ, ३ वैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सोमबारदेखि हुन लागेको भारतको पाँच दिने राजकीय भ्रमणबाट दुई देशबीचको सदियांैदेखिको आपसी सम्बन्ध थप मजबुत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लागू औषध विरुद्ध सडक नाटक
ललितपुर ,(नेस)। प्रहरी र समुदायको पहलमा ललितपुरको बंगलामुखी र मंगलबजारमा लागू औषध विरुद्ध शनिबार सडक नाटकको आयोजना गरियो । महानगरीय प्रहरी प्रभाग मंगलबजारले राष्ट्रिय युवा महासंघ नेपाल ललितपुरको शाखाको संयोजनमा
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच आज बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा उहाँहरुबीच नयाँवर्ष २०७४ प्रारम्भ भएको खुसियालीमा
पनौतिमा उम्मेदवार बन्न दौडधूप
काभ्रे,(नेस) । आगामी बैसाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनका लागि पनौति नगरपालिकामा विभिन्न दलका तर्फबाट उम्मेदवारका आकांक्षीहरुको दौडधूप सुरु भएको छ । पनौतिमा नेकपा एमाले सबैभन्दा अगाडि उम्मेदवार
प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणमा के छ सर्बोच्चको फैसला ? (हेर्नुस् पूर्ण विवरण )
काठमाडौँ, ५ चैत । यो साता नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा सामान्य सुधार आएको छ । यो साता नेप्से २ दशमलव ११ अङ्कले बढेर अन्तिम दिन एक हजार ३५७
कञ्चनपुर (सप्तरी), २९ फागुन । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधनमा सहभागिता जनाएर मुलुकको समस्या समाधान गर्न नेकपा (एमाले)लाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रेस मञ्च सप्तरीले आज राजविराजमा आयोजना
कञ्चनपुर, २९ फागुन । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को गोली लागी निधन भएका कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका–८ का गोविन्द गौतमको राष्ट्रिय सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टि गरिएको छ । कञ्चनपुरको दोदा
काठमाडौँ, २८ फागुन । नेपाली काँग्रेसले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा टिकाइ राख्न र संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन पहल गर्ने भएको छ । सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव तिमिल्सनाको राजीनामा स्वीकृत
काठमाडौँ, २८ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का स्वकीय उपसचिवका रुपमा कार्यरत मनहरि तिमल्सिनाले पदबाट दिएको राजीनामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्वीकृत गरेको छ । आफ्नो घरायसी तथा अन्य व्यावहारिक कारण
सामाजिक विकासको कार्यक्रम प्रभावहीन
कोरियाली युद्धमा अलगिएका परिवारको पुनर्मिलन
ट्रम्पद्वारा आप्रवासीबाट मारिएकाका परिवारसँग भेटघाट